1920 को टेप डोम स्क्यान्डल को बुझन
1920 को संवेदनात्मक भ्रष्टाचार प्रकरण पछि स्क्यान्डलहरूको लागि टेम्प्लेट सिर्जना गरियो
1920 को टेपोट डोम स्क्यान्डलले अमेरिकनहरूलाई प्रदर्शन गरे कि तेलको उद्योगले ठूलो शक्तिलाई बलियो बनाउँछ र सरकारी नीतिलाई प्रभावकारी भ्रष्टाचारको सामना गर्न सक्छ। अखबार अगाडिको पृष्ठहरूमा निस्केको घोडा, र मौन समाचार्रेल चलचित्रहरूमा, पछिल्ला घोटालाका लागि टेम्प्लेट सिर्जना गर्न लाग्यो।
विस्फोटक भ्रष्टाचार पत्ता लगाइएको थियो, अस्वीकार गरियो, कैपिटल हिलमा सुन्नु भएको सुनाइयो, र सबै समयका संवाददाता र फोटोग्राफरले दृश्यलाई झुन्ड्याए। समय सकिएपछि, केही क्यारेक्टरहरू परीक्षण र दोषी ठहरिएका थिए। तैपनि प्रणाली धेरै कम भयो।
Teapot डोम को कहानी अनिवार्य रूप देखि एक अयोग्य र अप्रत्याशित राष्ट्रपति को कथा थियो, लार्ससीस अधीनता द्वारा घिरे। क्यारेक्टरहरूको एक असामान्य कलाकारले विश्व युद्धको अशांति पछि वाशिंगटनमा शक्ति लिनुभयो, र अमेरिकनहरूले सोचेका थिए कि उनी सामान्य जिवनमा फर्केर फर्किन्छन् र उनीहरूले थोरै र छलको गाथालाई पछ्याए।
वारेन हार्डिंगको आश्चर्यचकित नामांकन
वरेन हार्डिंग 1920 को अभियान मा साथी साथीहरु संग प्रस्तुत। Getty Images
वरेन हार्डिंग मायनियन, ओहियो मा एक अखबार प्रकाशक को रूप मा समृद्ध भएको थियो। उनी एक बहिर्गमन व्यक्तित्वको रूपमा चिनिन्थे जुन उत्साहपूर्वक क्लबहरूमा सामेल भए र जनतालाई बोल्न मन पराउँथे।
सन् 18 999मा राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनले ओहियोका विभिन्न कार्यालयहरू सञ्चालन गरे। 1914 मा उहाँ यूएस सीनेटमा चयन गर्नुभयो। कैपिटल हिलमा उहाँ आफ्ना सहकर्मीहरूसँग राम्ररी मन पराउनुभयो तर कुनै पनि वास्तविक महत्त्वको कम गर्नुभयो।
19191 को दशकमा, हार्डिंग, अरूले प्रोत्साहन दिए, राष्ट्रपतिको लागि दौडने विचार गर्न थाले। अमेरिका विश्वयुद्धको अन्त्य पछि पीडाको समयमा थियो, र धेरै मतदाताहरू वुरोरो विल्सनको अन्तरराष्ट्रीयवादको विचारबाट थकित थिए। कठिनाइको राजनैतिक पछाडीले उनको सानो-शहरको मानहरू मान्थे, जसमा रिक्तिहरू जस्तै स्थानीय पीतल ब्यान्डको फाउण्डेसनले अमेरिकालाई थप पछाडिको समय बहाउँथ्यो।
उनको पार्टीको राष्ट्रपतिको नामांकन जित्नको कठोरताको मतभेद महान थिएनन्: तिनको एक फाइदा थियो कि रिपब्लिकन पार्टीमा कसैले पनि मन परेन। जुन 1909मा रिपब्लिकन नेशनल कन्भेन्सनमा एक सम्भव समझौता उम्मेद्वार हुन थाल्नुभयो।
यो दृढतापूर्वक संदिग्ध छ कि तेल उद्योगको लबीबिस्टहरूले कमजोर र पतला राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण गरेर अधिवेशनमा बल्किङलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दोरहेछ। गणतन्त्र रिपब्लिकन नेशनल कमेटी, विल हेज, एक प्रमुख वकील थियो जसले तेल कम्पनीहरु को प्रतिनिधित्व गर्यो र एक तेल कम्पनी को निदेशकों को बोर्ड मा पनि सेवा गरे। एक 2008 बुक, दिग्गज व्यवसायी पत्रकार लिटन मेकर्टनीनी द्वारा द टीपोट डोम स्क्यान्डलले साईनक्लेयर समेकित तेल कम्पनीको हैरी फोर्ड सिन्क्क्लेयरले उक्त कन्वेंशन कोष गर्न को लागी शिकागोमा आयोजित गरेको रकमलाई3लाख रुपैयाँ प्रदान गर्यो।
एक घटनामा पछि पछि लोकप्रिय हुनेछ, हार्डिंगलाई एक रातको अधिवेशनमा एक रातो रातो राजनैतिक बैठकमा सोधिने प्रश्न गरिएको थियो, यदि उनको व्यक्तिगत जीवनमा केहि थियो कि उनी राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गर्नबाट असहमति गर्नेछन्।
कठोर, वास्तवमा, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा धेरै स्क्यानलहरू छन्, मालप्रेस र कम्तीमा एक अवैध बच्चा सहित। तर केही मिनेटको लागि सोच्नु भएपछि हार्डिंगले आफ्नो अतीतमा केही पनि दाबी गरेन उनलाई राष्ट्रपति हुनबाट रोक्न सकेन।
1920 का चुनाव
वरेन हार्डिंग र क्याल्भिन कूलिज। Getty Images
कठोरताले 1920 को रिपब्लिकन नामांकनलाई सुरक्षित गर्यो। त्यसो कि गर्मी पछि डेमोक्रेट ओहियोबाट अर्को राजनीतिज्ञ नामाकरण गरे, जेम्स कोक्स। एक विशिष्ट संयोगमा, पार्टी पार्टीका उम्मेदवारहरू अखबार प्रकाशक थिए। दुबै राजनैतिक राजनीतिक क्यारियर पनि थिए।
त्यो सालको उपाध्यक्ष उम्मेदवार शायद रोचक थिए, अझ अधिक सक्षम उल्लेख गर्न। हार्डिंगको चलिरहेको जोडीले क्याल्भिन कूलज, म्यासाचुसेट्सका राज्यपाल थिए, जसले अघिल्लो वर्ष बोस्टन प्रहरीले हड्ताललाई हटाउन राष्ट्रिय रूपमा प्रसिद्ध बनाएको थियो। द डेमोक्रेटको उप-उपाध्यक्ष उम्मेदवारी फ्रैंकलिन डी रुोस्वेल्ट थियो , एक उदय तारा जसले विलसनको प्रशासनमा सेवा गरेको थियो।
कठोर रूपमा अभियान चलायो, ​​ओहियोमा घरमै रहन मनपराउँथ्यो र आफ्नो सामनेको पोर्चबाट नराम्रा भाषणहरू प्रदान गर्दछ। "सामान्य" को लागि उनको कल एक राष्ट्र को साथ एक युद्ध को साथ युद्ध ले मंगलबार विश्व युद्ध I र विल्सन को अभियान को राष्ट्र को लीग बनाउन को लागि पुनर्प्राप्ति देखि ।
कठिनाइको नतिजा नोभेम्बरको चुनाव सफल भयो।
कठिनाइको समस्या उहाँका मित्रहरूसँग
वारेन हार्डिंग आम तौर पर अमेरिकी जनता संग लोकप्रिय था और एक मंच है कि विल्सन साल से प्रस्थान की थी व्हाइट हाउस में आया था। उनी गोल्फ खेल्दै थिए र खेलकुद कार्यक्रममा भाग लिइन्। एक लोकप्रिय समाचार फोटोले तिनलाई अर्को लोकप्रिय अमेरिकी, बेबे रुथको साथ हात हान्यो।
केही मानिसहरू आफ्नो कैबिनेटमा नियुक्त गरेका हरि योग्य थिए। तर केही साथीहरू हार्डिंग अफिसमा फर्केका थिए स्क्यान्डलमा।
हेरी डघरर्टी, एक प्रमुख ओहियो वकील र राजनीतिक फिकर, हार्डिंगको उदयको उदयमा साधन भएको थियो। उसलाई अटाउटा जनरल बनाएर इनाम दिइयो।
अल्बर्ट पतन न्यू मेक्सिकोबाट एक सीनेटर भएको हुनाले हार्डिंगले उनलाई इन्टरनेटको सचिवको रूपमा नियुक्त गरे। पतन संरक्षण आन्दोलनको विरोध थियो, र सरकारी भूमिमा तेल पट्टिका कार्यहरू उनीहरूको अपमानजनक कथाहरूको धारणा सिर्जना गर्नेछन्।
कथित रूपमा एक अखबारका सम्पादकले यसो भने, "मलाई मेरो शत्रुहरूसँग कुनै समस्या छैन, तर मेरा साथीहरू ... तिनीहरू मर्नु पर्ने रातहरूमा हिंड्नेहरू हुन्।"
अफवाह र अन्वेषण
Wyoming मा Teapot रक Getty Images
1920 को दशकमा, यूएस नेभिगेशनले अर्को युद्धको अर्को युद्धमा सामरिक आरक्षितको रूपमा दुई तेल क्षेत्रहरू सञ्चालन गर्यो। युद्धपोतों संग कोइला जल को तेल जलने को रूप मा, नौसेना तेल को देश को सबै भन्दा ठूलो उपभोक्ता थियो।
अत्यन्त मूल्यवान तेलको भण्डार क्यालिफोर्नियाको एल्क हिल्समा रहेको थियो र वाइमिंगमा टाढा डोम भनिन्छ। Teapot डोम यसको नाम एक प्राकृतिक चट्टान गठन बाट लिइएको छ जुन चिहानको स्पेस जस्तो देखिन्छ।
आन्तरिक अल्बर्ट पल को सचिव नेभिगेशन को गृह विभाग को तेल भंडार को हस्तांतरण गर्न को लागी व्यवस्थित गर्यो। अनि उनले ड्रिलिंग गर्न साइटहरु लाई पट्टि गर्न को लागि उनको मुख्य रूप देखि हेररी सिन्क्क्लेयर (मम्मो ओयल कम्पनी को नियंत्रित) र एडवर्ड डोहेनी (पैन-अमेरिकन पेट्रोलियम को नियंत्रित) को मित्रहरु लाई व्यवस्थित गरे।
यो एक क्लासिक प्यारी सम्झौता थियो जसमा सिन्क्क्लेयर र डाउनीले पछाडी आधा मिलियन डलरको पछाडि पछाडी फिर्ता लिन्छ।
राष्ट्रपति हार्डिंग घोटालाका लागि अपमानजनक हुन सक्छ, जुन पहिलो 1922 को गर्मीमा समाचारपत्र रिपोर्ट मार्फत जनतालाई ज्ञात भएको थियो। अक्टोबर 1923 मा सीनेट समितिले गवाही गर्दा, विभागको आन्तरिक विभागका अधिकारीहरूले दावी गरे कि सचिव पतनले तेल दिए राष्ट्रपति प्राधिकरण बिना पट्टि पट्टि।
यो विश्वास गर्न गाह्रो थिएन कडा परिश्रमले के गरिरहेको थियो भन्ने कुरा थाहा थिएन, विशेषगरि तिनी अक्सर अचम्म लागेका थिए। एक प्रसिद्ध कहानी मा उनको बारेमा, हार्डिंग एक पटक एक व्हाइट हाउस सहयोगी भयो र स्वीकार गरे, "म यस काम को लागि फिट छैन र कभी यहाँ नहीं हुनु पर्छ।"
1923 सुरुमा व्यापक बजेटको घोडाको अफवाह वाशिंगटनमा फैलिएको थियो। कांग्रेसका सदस्यहरू हार्डिंग प्रशासनको विस्तृत अनुसन्धान सुरु गर्न इरादा थिए।
हार्डिंगको मृत्यु शॉक गरिएको अमेरिका
व्हाइट हाउसको पूर्व कक्षमा राष्ट्रपति हार्डिंगको कास्की। पुस्तकालयको पुस्तकालय
सन् 1923 को गर्मीमा हरिङ निकै बलियो तनाव भएको जस्तो देखिन्छ। उनले र उनको पत्नी अमेरिकी वेस्टर्नको दौरेमा आफ्नो प्रशासनमा भइरहेको विभिन्न घोटालाहरूबाट छुट्न थाले।
अलास्का भ्रमण पछि, हार्डिंग कैलिफोर्नियामा डुङ्गाले फर्किएपछि उनी बिरामी भए। क्यालिफोर्नियामा एक होटेल कोठामा डाक्टरहरूसँग मिलाइएको थियो, र जनतालाई भनिएको थियो त्यो ठीक छ र चाँडै वाशिंगटनमा फर्किनेछ।
अगस्त 2, 1923 मा, हार्डिंग अचानक मृत्यु भएको थियो, प्रायः सम्भवतः स्ट्रोकबाट। पछि, जब उहाँका अतिरिक्त-वैवाहिक परिस्थितिहरूको कथा सार्वजनिक भयो, त्यहाँ उनीहरूको ज्योति भएको थियो कि अनुमान लगाइएको थियो। (निस्सन्देह, त्यो साबित भएको थिएन।)
आफ्नो मृत्युको समयमा जनताको साथ दृढतालाई अझै धेरै लोकप्रिय थियो, र उनीहरूले आफ्नो शवलाई वाशिंगटनमा आफ्नो गाडी फिर्ता लिएका थिए। व्हाइट हाउसमा राज्यमा झूट पछि, उनको शरीर ओहियो, जहाँ उनी दफन गरियो।
राष्ट्रपति कूलज आफ्नो व्हाइट हाउस डेस्कमा। Getty Images
कठिनाइको उपाध्यक्ष, क्याल्भन कूलिजले रातको मध्यमा एक सानो वरमन्टन्ट फार्महाउसमा कार्यालयको शपथ लिन थाले जहाँ उनी छुट्टीमा थिए। कूलजको बारेमा जनतालाई थाहा थियो कि उहाँ केही शब्दहरूको एक व्यक्ति हुनुहुन्छ, "मौन"।
कूलज न्यू इंग्लैंड फ्रिजको हावाबाट सञ्चालन भएको थियो, र उनीहरूले मजाक-मायालु मायालु मायालु मायालु पक्षपातको विपरीत देखिन्छ। त्यो कठोर प्रतिष्ठा उनको राष्ट्रपतिको रूपमा मदतकारी हुनेछ, जस्तै घोटाला जो जनता बन्न पुगेको थियो कूलजमा संलग्न भएन तर उनीहरूको मृतक पूर्वतिर।
Newsreels for sensational spectacle
न्यूजरायल क्यामेराले टेप डोम गवाहहरूलाई लुगा लगाउँछन्। Getty Images
1923 को पतनमा टोपोट डोम रिश्वर्व घोडामा सुनेपछि कैपिटल हिलमा सुरु भयो। मन्टानाका सीनेटर थॉमस वाल्शले यो अनुसन्धानको नेतृत्व गरे, जसलाई पत्ता लगाउन खोजेको थियो कि कसरी र किन नौसेनाले यसको तेल भण्डार अल्बर्ट पतनको नियन्त्रणमा पारेको थियो। आन्तरिक विभाग।
सुन्दाहरूले जनतालाई धनी तेलको रूपमा राखे र प्रमुख राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई गवाही गर्न भनिन्छ। स्याउ फोटोग्राफरहरूले सर्टिफिकेटमा प्रवेश गरेर र छोड्ने पुरुषहरूको चित्रहरू कब्जा गरे, र केही तथ्याङ्कहरू रोक्न रोकिइन् र मौन न्यूजरेल क्यामेराले दृश्य रेकर्ड गरे। प्रेसको व्यवहारले अन्य स्क्यानलहरू कसरी आधुनिक युगसम्मको लागि मानक बनाउन लगाउँदछ, मीडियाले ढाकिएको छ।
1924 को सुरुवात पछि पतनको योजनाको सामान्य परिदृश्य सार्वजनिक भएको थियो, धेरै दोष दोषी राष्ट्रपति राष्ट्रपति केविन कूलिजको सशक्त प्रतिस्थापन भन्दा सट्टा बिस्तारै राष्ट्रपति हार्डिंगमा आइरहेको थियो।
Coolidge र रिपब्लिकन पार्टी को लागि पनि उपयोगी थियो कि वित्तीय योजनाहरु तेलमैन र हार्डिंग प्रशासन अधिकारीहरु द्वारा सख्त हुन को लागी जटिल थियो। सार्वजनिक रूपमा प्रत्येक मुहार पछ्याउँदै स्वाभाविक रूपमा समस्या थियो र सागामा परिणत भयो।
ओहियो बाट राजनीतिक फिक्सर जसले हार्डिंग राष्ट्रपतिको मालिकलाई हेरचाह गर्यो, हरि डरर्र्र्तले धेरै स्क्यानलहरूसँग तातोपानीमा असर पारेको थियो। Coolidge ले उनको इस्तीफा स्वीकार गरे, र उनको सक्षम उत्तराधिकारी, हार्लन फिस्के स्टोन (जो पछि फ्रैंकलिन डी। रोस्वेल्ट द्वारा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को नामित गरे ) को बदले जनता संग अंकहरु बनाए।
स्क्यान्डल को विरासत
टीपोट डोम 1924 को चुनावमा एक मुद्दा भयो। Getty Images
सन् 1924 को चुनावमा डेभरेट्सका लागि राजनीतिक अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर कलकले हार्डिंगबाट आफ्नो दूरी राखेका थिए र हार्डिंगको कार्यकालमा भ्रष्टाचारको खुलासाले उनको राजनीतिक भाग्यमा असर पारेको थियो। कूलिज 1924 मा राष्ट्रपतिको लागि भाग्यो र चुनेको थियो।
छाला तेल पट्टिहरू मार्फत जनतालाई धोका दिने योजनाहरू जाँच गर्न जारी छ। अंततः गृह विभागको पूर्व प्रमुख, अल्बर्ट पतन, परीक्षण खडा भयो। उहाँ दोषी ठहराइएको थियो र एक वर्ष जेलमा सजाय भयो।
पहिलो पूर्व कैबिनेट सचिव बनेर अफिसमा अपमानजनक सम्बन्धी जेल सजावट सेवा गर्न इतिहासले पतन गर्यो। तर अन्य व्यक्ति जो रिश्वरी घोटालाको भाग भएको हुन सक्थ्यो अभियोगबाट बचाइयो।
लिंकनको कूपर युनियन ठेगाना
जॉन एफ। केनेडी प्रेसीडेंसी फास्ट तथ्य
बिरुद्ध राष्ट्रपतिहरूको स्थान
चेस्टर ए आर्थर: संयुक्त राज्यको बीसौं राष्ट्रपति
राष्ट्रपति सेवानिवृत्ति लाभ
यूलीस ग्रांट - संयुक्त राज्य अमेरिका को आठवें राष्ट्रपति
स्पेनिस Verb Vivir कन्जगेट सिक्नुहोस्
वैकल्पिक एसएटी निबंध बारे जान्नुहोस्
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) रूपान्तरण कम्पनीहरू
हालै हेभी मेटल एल्बमहरूको मितिहरू रिलीज गर्नुहोस्
तपाईंले एक आविष्कारक लग बुक सुरु गर्नु अघि
उच्चारणसँग मद्दत गर्न फोकस शब्द प्रयोग गर्दै
एक तर्क मा विरोधाभासी परिसर
किन म 10 पिन छोड्छु?
वाक्यांश के हो? व्याकरण र व्याकरणमा उदाहरणहरू
दक्षिण अफ्रिकाको गठनको इतिहास
वनस्पति तेलबाट बायोडेलेल कसरी बनाउने?
दोहोरो नामांकन हाई स्कूल र कलेजमा
लेखन उपकरण - पेंसिल र मार्कर
यूएस मा शीर्ष5रूढिवादी राज्यहरु
सौर प्रणाली मार्फत यात्रा: ग्रह यूरेनस
GRE विश्लेषणात्मक लेखन निबंध कसरी लेख्नुहोस्
निबन्ध संगठन पैटर्न
एक शॉट को ईंट - ए शोर Clunker
सुंगिर: रूसी ऊपरी पीलालिथिक साइट
हे सोलो एमओओ गीत र अंग्रेजी पाठ अनुवाद
पूजा के हो?
शबबा मा बच्चाहरु लाई आशीर्वाद दिनुहोस